Swiss-Belhotel International dia namoaka drafitra fanitarana fatratra ao Vietnam
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Swiss-Belhotel International dia namoaka drafitra fanitarana fatratra ao Vietnam
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fampiasam-bola • Vaovao • Resorts • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao Mafana Vietnam
Swiss-Belhotel International, ny sehatry ny fitantanana fandraisam-bahiny manerantany, dia nanambara drafitra fanitarana lehibe ny tahiry fandraisam-bahiny ao i Vietnam, iray amin'ireo tsena fizahan-tany mahaliana sy mipoitra haingana indrindra eto an-tany.
Amin'izao fotoana izao, ny vondrona dia miasa hotely iray any Vietnam, Swiss-Belresort Tuyen Lam, fialantsasatra manintona any amin'ny Central Highlands ao amin'ny firenena, tsy lavitra an'i Da Lat. Mampifangaro ny fandraisam-bahiny eo an-toerana amin'ny fomba eropeana, ity trano fandraisam-bahiny 151 ity dia malaza amin'ny mpizahatany miala sasatra, na golf ary ny mpanomana fihaonana.
Saingy mikendry ny hanitatra ny portfolio-ny Vietnamianina amin'ny trano fandraisam-bahiny 10 farafahakeliny farafaharatsiny amin'ny taona 2021 ny orinasa, ary ao anatin'izany ny fisokafan'ny mari-pankasitrahana amin'ny toerana lehibe eo amin'ny sehatry ny asa sy fialamboly manerana ny firenena.
Swiss-Belhotel International dia efa nanao sonia hotely vaovao roa any Vietnam. Voalohany, ny Swiss-Belhotel Suites & Residences Ha Long Bay dia kasaina hisokatra amin'ny telovolana fahefatra 2019, izay mijery ny morontsiraka avaratra atsinanana misy ny vinan-dranomasina UNESCO voatanisa lova navoakan'ny UNESCO. Ity fananana vaovao mahavariana ity dia ahitana efitrano miorina amin'ny trano 350 ho an'ny fialan-tsasatra fohy sy lava, miampy fotodrafitrasa marobe, toy ny spa, foibe fanatanjahan-tena, dobo filomanosana, toeram-pivarotana F & B maro, efitrano fivoriana ary efitrano fivoriana.
Avy eo amin'ny 2022, Swiss-Belresort Bai Dai Phu Quoc dia hisokatra amin'ny morontsirak'i Phu Quoc, firavaka nosy atsimon'i Vietnam. Miorina mivantana eo amoron-dranomasina fasika, ity trano fialantsasatra mahafinaritra ity dia ahitana efitrano sy villa 218, miampy dobo an-kalamanjana, spa ary safidy safidy fisakafoanana, ao anatin'izany ny trano fisakafoanana hazan-dranomasina sy klioban'ny morontsiraka. Izy io koa dia hanome toerana ho an'ny hetsika sy fampakaram-bady.
Ireo fananana vaovao miavaka ireo dia maneho ny kalitaon'ny tetikasa Swiss-Belhotel International izay manintona an'i Vietnam ankehitriny. Ny orinasa dia manohy manohy andian-dahatsoratra manome toky amin'ny toerana maro samihafa, ao anatin'izany ny tanàna lehibe toa an'i Hanoi, Ho Chi Minh City, Haiphong ary Danang, toerana amoron-dranomasina toa an'i Phu Quoc, Quy Nhon ary Van Phong, ary ireo toerana ara-kolontsaina toa an'i Sapa sy Hoi An.
“Miaraka amin'ny fahitana voajanahary tsara tarehy, morontsiraka lava ary kolontsaina mahasarika, Vietnam dia toerana iray tena manintona. Swiss-Belhotel International dia mahita ny mety ho fitrandrahana lehibe manerana ny firenena, tsy amin'ny toerana amoron-dranomasina ihany fa amin'ireo tanàna mavitrika sy foibe fananana koa. Manantena izahay ny hiara-hiasa amin'ireo mpandraharaha eo an-toerana hitondra ny fandraisam-bahiny manerantany Swiss-Belhotel International ho an'ny vahiny any Vietnam mientanentana, "hoy i Gavin M. Faull, filoha sy filohan'ny Swiss-Belhotel International.
Ny indostrian'ny fizahantany any Vietnam amin'izao fotoana izao dia mitazona ny tampon'ny onja, mitarika anton-javatra isan-karazany ao anatin'izany ny toekarena miroborobo, ny firongatry ny raharaham-bahiny sy ny isam-paritra, ny politikan'ny governemanta mieritreritra mialoha ary ny fotodrafitrasa fitaterana maoderina. Nahatonga ny isan'ny mpitsidika miakatra izany; Ny fahatongavan'ireo iraisam-pirenena tany Vietnam dia nitombo avo roa heny hatramin'ny 2015 ary nitombo avo telo heny tao anatin'ny folo taona lasa, nahatratra 15.5 tapitrisa tamin'ny 2018 - firaketana vaovao iray taona vaovao.
Miroborobo ihany koa ny sehatry ny hotely eto amin'ny firenena; raha ny angom-baovao avy amin'ny STR, dia misy trano fandraisam-bahiny 23,359 25 eo an-dalam-pananganana any Vietnam - mitovy amin'ny efa ho XNUMX isan-jaton'ny famatsiana efitrano misy ao amin'ny firenena.
Swiss-Belhotel International izao dia miasa portfolio maneran-tany misy hotely, trano fandraisam-bahiny ary fonenana efa ho 150 ao amin'ny kaontinanta efatra. Ny orinasa dia manolotra fanangonana marika 14 ihany koa, manomboka amin'ny teti-bola misy hotely sy hotely fivarotana ary trano fandraisam-bahiny ary trano onenana.